Real Madrid Jawaabta ay ka bixineyso ku biiritaan Coutinho ee Barcelona Maaha mid ay ku farxi doonto Liverool | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid Jawaabta ay ka bixineyso ku biiritaan Coutinho ee Barcelona Maaha mid ay ku farxi doonto Liverool
Published on January 10, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(10-1-2018) Kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa lasheegayaa in ay Wado qaban qaabo jawaab ay ka bixinayaan ku soo biiritaankii kooxda Barcelona ee Kubada sameeyaha dalka Braziil ee Philippe Coutinho iyaga oo donaya in ay soo qaataan Cayaaryahan u dhigma.
Real Madrid Maamulkeeda ayaa lasheegayaa in ay isku afgarteen in ay lasoo wareegaan Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah,kaas oo ay jawaab uga dhigi doonaan Saaxiibkii Philippe Coutinho oo ku so biirey kooxda ay Cadawga isku yihiin ee Barcelona.
Mohamed Salah oo wacdaro dhigay xiligaan ayaa la aaminsayahay in lagu heli karo lacag aad uga yar midii ay Barcelona ku qaadatay Philippe Coutinho taas oo dhamayd €160m. waxaana lagu qiimeeyaa €45 million.
Macalinka Real Madrid Zinedine Zidane ayaa u arka Mohamed Salah mid xiligaan dhanka Weerarka kaga Wanaagsan Cayaartoydiisa hoos u dhacday ee kala ah Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema sidoo kale Waxaa ku qanci doona Xiddiga dalka Masar Taageerayaasha Real Madrid oo hada ka masayrsan ku soo biiritaanka Philippe Coutinho ee kooxda Barcelona.